Akụkọ - Uru nke karama iko dị ka arịa
Iko karama bụ nkwakọ akpa nke nri na ihe ọverageụ productsụ na ọtụtụ ngwaahịa, nke a na-eji ebe niile. Glass bụkwa ụdị akụrụngwa nkwakọ ngwaahịa. N'ihe banyere ọtụtụ ụdị ihe nkwakọ ngwaahịa na-agbanye n'ahịa, akpa iko ka na-etinye ọnọdụ dị mkpa na nkwakọ ngwaahịa ihe ọ whichụ ,ụ, nke a na-apụghị ịwepụ iche na njirimara nkwakọ ngwaahịa ya nke ndị ọzọ na-enweghị ike dochie ya.
Dị ka otu n'ime isi iko ngwaahịa, karama na Mkpọ bụ ndị maara na-ewu ewu nkwakọ containers. N’ime iri afọ ndị na-adịbeghị anya, site na mmepe nke teknụzụ mmepụta ihe, e mepụtawo ọtụtụ ihe nkwakọ ngwaahịa ọhụrụ, dị ka plastik, ihe ndị mejupụtara, akwụkwọ nkwakọ ngwaahịa pụrụ iche, tinplate, aluminium na ihe ndị ọzọ. Iko, ụdị ngwugwu nkwakọ ngwaahịa, na asọmpi kpụ ọkụ n'ọnụ ya na ihe ngwugwu ndị ọzọ. N'ihi uru nke nghọta, ezi nguzo kemịkalụ, ọnụ ala, ọdịdị mara mma, mmepụta dị mfe na imegharị, karama iko na ite ka nwere njirimara ndị enweghị ike dochie ihe ngwugwu ndị ọzọ n'agbanyeghị asọmpi nke ngwugwu ndị ọzọ. Glass nkwakọ akpa bụ ụdị nke uzo uzo mere nke wụrụ awụ iko site ịfụ na ịkpụzi.
Ihe eji eme ihe na karama iko na-abawanye kwa afọ, mana nke a na-emegharị dị ukwuu na enweghị atụ. Dị ka Associationtù Glass Packaging si kwuo: Ike a zọpụtara site na imegharị karama iko nwere ike ime ka ọkụ ọkụ ọkụ 100-watt na-enwu ihe dị ka awa 4, na-agba ọsọ kọmputa na nkeji 30, ma na-elele nkeji 20 nke mmemme TV. Ya mere, iko iko bụ ihe dị oke mkpa. Ighagharị karama iko na-azọpụta ume ma belata ikike mkpofu nke ebe mkpofu, nke nwere ike inyekwu akụrụngwa maka ngwaahịa ndị ọzọ, gụnyere karama iko n'ezie. Dị ka akwụkwọ akụkọ National Consumer Plastic Bottle Report nke Chemical Chemical Council Council nke United States si dị, ihe dị ka ijeri 2.5 ijeri karama rọba emegharịrị na 2009, na ọnụego ntụgharị nke naanị 28%. Ighaghachi karama iko dị mfe ma baa uru, na usoro nke usoro mmepe na-adigide, nwere ike ịchekwa ike ma kpuchido akụ sitere n'okike.